Muungaab: Bur iyo biyo ayaa loo kala baxayaa haddii bulshadu ila shaqeyso – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muungaab: Bur iyo biyo ayaa loo kala baxayaa haddii bulshadu ila shaqeyso
3rd March 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Jen. Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa sheegay in haddii bulshadu la shaqeeyaan maamulka gobolka Banaadir ee hogaankiisa loo dhiibay loo kala bixi doono bur iyo biyo.
Muungaab ayaa hadalkaan ka sheegay munaasabad lagu qabtay Muqdisho oo lagu soo dhaweynayey magacaabistiisa, wuxuuna tilmaamay inuu ku dedaalayo inuu wax ka qabto amaanka Banaadir oo ah mid aan deganeyn.
“Waxaa hubaal ah hadaad balanqaadka aad ii sameyseen aad fulisaan in magaalada Muqdisho bur iyo biyo loo kala bixi doono, sidii aan u xasilin laheyn” ayuu yiri Jen, Mungaab.
Wuxuu sheegay Jen. Mungaab inuusan hoos geli doonin madaxtooyada oo uu degi doono meelo ka mid caasimadda oo uu ku sheegay bahalo galeen.
“Waraabe godkiisa loogu degaa, aniga meelaha bahala galeenka loo yaqaano ayaan degaa, aniga Meeyarkii dhana ah, waaba igu waajib inaan meelaha fog dego, ee Madaxtooyada hoosta ka galaa wasiiradana ha soo baxaan idin dhihi maayo, waa idin bilaabaa” ayuu sidoo kale yiri Jen. Muungaab.
Gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Jen. Muungab ayaa tilmaamay inuu hadda degan yahay xaafadda Sanca dhanka degmada Kaaraan, islamarkaana uu degayo xaafado kale oo ka mid ah Muqdisho, kana fog madaxtooyada.
“Anigu labadii sano ee lasoo dhaafay waxaan deganaa xaafadda Sanca dhanka degmada Kaaraan, cid kasta gurigeyga wey taqaanaa gurigeyga, Koofur waa deganahay, bariga iyo galbeedna waan degi doonaa, maxaa yeelay waa godod badanahay, aniga taageeradiina codsanaa” ayuu sidoo kale yiri Jen. Muungaab.
Gudoomiyihii hore ee maxkamadda ciidamada qalabka sida, Jen. Muungaab ayaa dhawaan madaxweyne Xasan Sheekh u magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir, kadib markii xilka laga qaaday gudoomiyihii hore Maxamuud Axmed Nuur “Tarsan”.
Uganda oo Muqdisho u direysa ciidamo ilaalilya Xarrumaha Qaramada Midoobay